65 ruux Soomaali oo lagu dilay deegaanka ismaamulka Oromada Itoobiya * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
65 ruux Soomaali oo lagu dilay deegaanka ismaamulka Oromada Itoobiya
By A warsame	 Last updated Dec 16, 2017
Mareeg.com-Illaa 65 ruux oo Soomaali ah ayaa lagu dilay deegaano ka tirsan Ismaamulka Oromada Itoobiya, iyadoo uu sii xoogeysanayo rabshadaha iyo isku dhacyada u dhaxeeya Soomaalida iyo Oromada.
Tuulada Gadule oo hoos tagta degmada Darulow ee Ismaamulka Oromada ayaa lagu dilay illaa 65 ruux oo Soomaali ah, kaddib markii ay soo weerareen Ciidamo ka tirsan kuwa Oromada.
Weerarkan ayaa ka dhashay markii Ciidamada Liyuu Booliska ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ay weerareen deegaan ku dhow Gadule, waxaa halkaas ku dileen labo askari.
Reerkii askariga laga dilay ee oromada ahaa ayaa la sheegay inay iyana weerar ku qaadeen Soomaalidii ku sugneyd deegaanka Gadule, kaddibna ay laayeen.
Maamulka deegaanka Oromada ayaa sheegay in la dilay 14 ruux Soomaali ah, iyagoo meesha ka saaray sheegashada tirada 65 ruux ee la dilay.
Isku dhacyada u dhaxeeya Soomaalida iyo oromada oo sanadkan bilowday ayaa sii kordhaya, waxaana ku barakacay boqolaal ruux.
Dowladda Itoobiya ayaa dhawaan sheegtay in ay gacanta ku dhigtay dadkii ka dambeeyay rabshadaha, isla markaana ay xabsiga dhigtay, laakiin waxaa muuqda in ay dib u bilowdeen dagaallada.
Ethiopia:65 Somali civilians killed in Oromo region